रायोको साग खेती प्रविधि : फाइदा जानिराखौ - कृषि सूचना
रायोको साग खेती प्रविधि : फाइदा जानिराखौ
२०७७ जेष्ठ ७ गते कृषि सूचना
रायोको साग, बहुउपयोगी, स्वास्थ्यकोलागी अनेकौँ फाइदै फाइदा भएको बिशेष जाडो (हिउँद) महिनामा पाइने बिभिन्न हरियो सागपात मध्ये रायोको साग पनि एउटा एक प्रमुख तरकारी हो।
लगातार एउटै खेत वारीमा लगाउँदा वोटहरुको वृद्धि नहुने, दिउसो ओइलाउने तर विहान वेलुका सामान्य देखिने के कारणले होला रु यस्तो हुनवाट कसरी वचाउन सकिन्छ ?
नेपालमा यसको खेती कुन कुन क्षेत्रमा गरिन्छ ?
रायोको लागि कस्तो हावापानी उपयुक्त हुन्छ ?
यसको खेती कस्तो माटोमा गर्न उपयुक्त हुन्छ ?
नेपालमा रायो खेतीका लागि कस्ता जातहरु सिफारीस गरिएका छन् ?
भौगोलिक क्षेत्र अनुसार कुन क्षेत्रमा कुन समयमा वाली लगाउन उपयुक्त होला ?
रायोको खेती गर्दा जमीनको तयारीमा कत्तिको ध्यान पुर्यावउनु पर्दछ ?
रायो छिटो तयार हुने वाली भएकोले लगाउनु भन्दा अगाडी जमीनको तयारी राम्ररी गर्नु पर्दछ। यसको लागि २५–३० से।मि। गहिराई सम्म राम्ररी खनजोत गरी प्रांङ्गारिक मल प्रशस्त हाल्नु पर्दछ । माटोलाई बुर्बुराउदो तुल्याउनु पर्दछ ।
रायोसँग अन्तरवालीको रुपमा अन्य वाली लगाउन सकिन्छ र? अन्तरवालीमा सुहाउने त्यस्ता कुन कुन वाली हुन सक्छन् :
अल्टरनेरिया थोप्लो रोगका लक्षण कस्ता हुन्छन् रु यसको व्यवथापन कसरी गरिन्छ ?
रायोमा भाइरस रोगका लक्षणहरु यस्ता हुन्छन् रु यसको व्यस्थापन कसरी गरिन्छ ?
रायो साग सारेपछि कति दिन सम्ममा टिप्न तयार हुन्छ रु टिप्दा खेरी कस्ता कस्ता पात र कसरी टिप्नु पर्दछ ?
तु्सारो वा ज्यादा ठण्डाबाट जोगाई रायो खेती गर्ने कुनै तरिका छ ?
संसारभर पाइने अनकौँ तरकारीमध्ये दोस्रो बढी पोषणयुक्त तरकारीमा रायो पर्छ । तसर्थ, रायो स्वास्थ्यका दृष्टिले झनै लाभदायक छ । रायोलाई पकाएर, काँचै वा सिजनिङ गरेर खान सकिन्छ । धेरै पकाउँदा भने यसमा रहेका पोषण तत्व नष्ट हुन सक्छ । अब जानौँ यसका फाइदाबारे :
-रायोको सागमा भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । रतन्धो, पुरानो बाथ, कफ आदिबाट बच्न रायो उपयोगी हुन्छ ।
-रायोमा पाइन्ने भिटामिन ए, सी र केयुक्त तत्वले हाम्रो शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छन् ।
-रायोको सागमा पाइने फोलिक र म्याग्नेसियमले शरीरमा रहने विभिन्न विकारयुक्त वस्तुलाई बाहिर निकाल्छ ।
-रायोको दाना पिसेर तरकारीमा हालेर खाँदा पाचन पक्रिया बलियो बन्छ । यसले भोक नलाग्ने समस्यासमेत हटाउँछ ।
-शरीरमा भिटामिन केको कमी भएमा गर्भवतीलाई वाकवाकी बढी नै लाग्ने, टाउको दुख्नेजस्ता समस्या हुन्छ । रायोको सागमा भिटामिन के प्रचुर मात्रामा पाइने भएकाले गर्भवतीलाई खुवाउँदा समस्या हल हुन्छ ।
-जाडोमा बाथका रोगीलाई हड्डी दुख्ने समस्या हुन्छ, खासमा बढी बुढाबुढीलाई । रायोमा पाइने कपरले यो समस्या हल गर्छ।
-रायो भिटामिन सीको पनि राम्रो स्रोत हो । तसर्थ, रुघाखोकी लागिरहने मानिसले रायोको साग खानुपर्छ ।
-रायोले पिसाबनलीमा हुने पत्थरीलाई कम गर्छ ।
-रायोको साग नियमित खाँदा क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्दछ ।
Tags: रायोको साग खेती प्रविधि
पछि गमलामा तरकारी खेती : रोप्ने तरिका जानिराखौ
अघी कसरि गर्ने ड्रागन खेती ? ड्रागन फलको फाइदा : जानिराखौ